မီးအတွက် ဖရီးမင်းတြားကြီးမှာတမ်း | PoemsCorner
သြော် မီး မီး မီး
..သြော် မီးလောင်တဲ့သတင်းတွေ ကြားရပြန်တော့ ….ချစ်တယ်မီးရယ် လို့ဆိုတဲ့ ရန်အောင်၊ မီးကလေ… မီးကလေ လို့ပြောတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ၊ မီး ဆိုတဲ့နာမည်ပါတဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုအစာမကြေချင်ဘူးနော်..ဟင်းဟင်း။ ရန်သူမျိုး ၅ ပါးထဲမှာ မညှာတာဘယ်သူ့မှမထောက်တာ…ကဲ… ကိုထွန်းရွှေ ကြီးရဲ့ မီးအကြောင်း ရက်ပ်တစ်ပုဒ်လောက် လုပ်လိုက်ဦးမှ။ ဂျောက်.. ရို့ရို့ .. ငါ ပြောမယ် ခု ထရှို့ အဲ..ထငြိမ်း.. လောင် လောင် လောင်..ပက်..ပက်..ပက်..ရေနဲ့ပက်..မရရင် ပိုက်ဆံနဲ့ပက်..အု…၀ု..ရေ့….
မိတ်ဆွေအပေါင်းရောင်းရင်းများတို့လေ… .(ဒူ ဝေ ဝေ ဝေ ဝေ……..မဝေ…တဝေ….ဝေ…ဝေ) ဖရီးမင်းတြားကြိီး မိန့်တော်မူလိုက်သည်မှာ…… ”ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော နွေရာသီ အကြို..မချမ်းအေးလှသော ဆောင်းရာသီမီးပျက်ရက်များသို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိတို့နေအိမ်ဂေဟာများတွင်ဖယာင်းတိုင်များ၊ အင်ဗာတာများ၊ မီးစက်များ ၊ အယ်အီးဒီမီးအိမ်များ အရံသင့်ဆောင်ထားကြရန်ဖြစ်ပေသည်” (ဒူ ဝေ ဝေ ဝေ ဝေ……..မဝေ…တဝေ….ဝေ…)
In: Others Posted By: ကိုကိုဖရီး Date: Dec 29, 2011
သည်းခြေမှာတမ်း – နရီထက်
Leave comment 1 Comment & 211 views
By: ei lay at Oct 4, 2012